आइपीएलः आज ५ खेलाडी परिर्वतन, को–कोले पाए मौका? - Everest Dainik - News from Nepal
आइपीएलः आज ५ खेलाडी परिर्वतन, को–कोले पाए मौका?
काठमाडौं, चैत १९ । इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) अन्तर्गत रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लोर विरुद्धको खेलमा राजस्थान रोयल्सले टस जितेर बलिङ रोजेको छ ।
खेल नेपाली समयअनुसार साँझ ८ः१५ बजेदेखि राजस्थानको जयपुरमा शुरु भएको छ । लगातार तीन खेलमै पराजित भएका यी दुई टोली आज पहिलो जीतका लागि भिड्दै छन् । बैंग्लोरमा विराट कोहली र राजस्थानमा आजिंक्य रहाणे कप्तान छन् ।
याे पनि पढ्नुस आइपीएलः रोकिएन बैंग्लोरको विकेट पतन
आजको खेलमा बैंग्लोरले ३ र राजस्थाले २ खेलाडी परिर्वतन गरेको छ । विराटको टिमले राजस्थान विरुद्धको खेलमा अक्षदीप नाथ, नवदीप सैनी र कार्मस स्टोइनिसलाई मौका दिएको दिएको छ । उनीहरुले शिवव दुवे, कोलिन डी ग्रेण्डहोम र प्रयास रे बर्मनको स्थानमा मौका पाएका हुन् ।
यता रहाणे यो वर्षको आइपीएलमा पहिलो शतक प्रहार गर्ने सञ्जु स्यामसन र बलर जयदेव उनद्कटलाई विश्राम दिएको छ । घाइते भएका कारण सञ्जुले आज टिममा स्थान नपाएका हुन् । उनदकट र सञ्जुको स्थानमा स्टुअर्ट बिनी र वरुण आरोनले मौका पाएका छन् । यस्तो छ पूरा टिम–
राजस्थान रोयल्सः अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कृष्णप्पा गौतम, श्रेयस गोपाल, स्टुअर्ट बिन्नी, राहुल त्रिपाठी, बेन स्टोक्स, स्टीव स्मिथ, जोस बटलर (विकेटकीपर), जोफरा आर्चर, धवल कुलकर्णी, वरुण एरोन ।
याे पनि पढ्नुस आइपीएलः हैदराबादविरुद्ध कप्तान रहाणेको अर्धशतक
रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लोरः विराट कोहली (कप्तान), एबी डि विलियर्स, पार्थिव पटेल (विकेटकीपर), मार्कस स्टोइनिस, शिमरोन हेटमेयर, उमेश यादव, युजवेन्द्र चहल, मोहम्मद सिराज, मोइन अली, अक्षदीप नाथ, नवदीप सैनी ।
ट्याग्स: IPL, RR Vs RCB